Saadaalinta 2014 ee Isbeddellada Websaydhka | Martech Zone
Jimco, Febraayo 21, 2014 Jimco, Febraayo 21, 2014 Douglas Karr
Haddii 2013 uu ahaa sanadkii nuxurka iyo moobiilka, malaha sannadkan waa sanadkii macnaha guud. Taasi waa, adoo hor dhigaya nuxurka hortiisa adeegsadaha goorta iyo meesha ay u baahan yihiin. Kaliya kama hadlayno raadinta, waxaan sidoo kale ka hadlaynaa farriinta riixista iyo isku dhafka dhinac saddexaad.
Faahfaahintan ka socota Netbiscuits waxay saadaalinaysaa saadaashaas. Korsashada taleefannada gacanta ayaa sii kordheysa, iyadoo la siinayo awoodo juquraafiga dhulka iyo kororka tirada aaladaha ku xiran si loo ogaado oo loola xiriiro.
Waxaan filan karnaa inaan aragno baahida weyn ee khibradaha aadka loo habeeyay ee mudnaanta siinaya macnaha saxda ah ee isticmaalaha. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saara noocyada sannadka 2014, mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyadan laftiisu waxay aasaas ahaan u ruxayaan sida ay ururrada ugu baahan yihiin inay ula macaamilaan macaamiishooda. Calaamaduhu kama sii tirsanaan oo keliya shirkad. Waxay la caadaysteen dadka doortay inay la falgalaan, dhammaadka sannadka 2014, tani waxay u baahan doontaa inay si isdabajoog ah uga sii badato sidii hore.
Degso warbixinta maanta si loo akhriyo talooyinka Netbiscuit ee ku saabsan ka-qaybgalka websaydhyada fara badan ee kanaalyada ah.
Tags: Macnaha guudwacyiga macnaha guudMacluumaadka SuuqgeyntaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkabuskudka